Stream vidiyo na VLC Media Player ma ọ bụ VLC Streamer
VLC bụ a ga-enwe ebe ọ bụ na ọ bụghị nanị na o nwere ike isi-akpọ ihe na-adịghị agwụ agwụ ndepụta nke multimedia faịlụ dị iche iche na sistem ma ọ pụkwara-eji na-enuba videos rụọ ọrụ nke ọma dị iche iche na ngwaọrụ, na kwa enweghị ihe ọ bụla ngbanwe chọrọ. Otu onye nwere ike na-enweta ogologo ndepụta fim na ha nwere, ọdụ n'ebe ọ bụla n'ụlọ ha na-eji ma VLC Media Player na Streamer. Ebe a bụ otú n'ihi na ma software.
Nanị na-eso nzọụkwụ nyere n'okpuru na ị ga-na ụzọ gị na-ekpori ndụ videos na gị na ọtụtụ ngwaọrụ na oge.
Nkebi nke 1: VLC Media Player
Part 2: Olee otú iji VLC Media Player iji strimụ videos na ọtụtụ ngwaọrụ
Part 3: VLC Streamer
Part 4: Olee otú iji VLC Streamer iji strimụ videos na ọtụtụ ngwaọrụ
Part 5: The Best VLC Alternative
Atụmatụ: Magburu onwe mgbasa ozi ọkpụkpọ na-arụ nile di iche iche nke multimedia faịlụ na nwekwara ike enuba video on a networ. Akwado os: Windows, Mac, Linux, Android, iOS wdg
Nkebi nke 2: Olee otú iji VLC Media Player iji strimụ videos na ọtụtụ ngwaọrụ
Nzọụkwụ 1: Download na wụnye VLC Media Player na iji njikọ dị ka e n'elu.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a, na-agba ọsọ VLC Media Player na pịa na nhọrọ Media> Open File.
Nzọụkwụ 3: Pịa na bọtịnụ agagharị / Tinye na họrọ faịlụ ị ga-achọ enubakwa n'ime ya.
Nzọụkwụ 4: Pịa na Stream / Save button na mgbe ahụ họrọ ntọala.
Nzọụkwụ 5: Ugbu a, Stream mmepụta igbe kwesịrị oghe, ego Play N'ógbè igbe, ma ọ bụrụ na ị chọrọ faịlụ na na na kọmputa na ị na-idebe ya na, ma ọ bụghị pịa UDP igbe, jupụta na adreesị IP nke kọmputa na ị na-aga na-enuga, na-ahapụ Port dị ka 1234.
Nzọụkwụ 6: Ugbu a, pịa bọtịnụ Stream na-aga n'ihu.
Nzọụkwụ 7: Gaa na ngwaọrụ / kọmputa na ị chọrọ nkiri iyi ed ka, wụnye VLC na na PC na-agba ya.
Nzọụkwụ 8: Pịa na Njikwa, mgbe ahụ họrọ Open Network Stream. Adịghị agbanwe agbanwe ọ bụla ntọala na pịa OK.
Nzọụkwụ 9: bụrụ na ihe niile na-arahụ nri, faịlụ kwesịrị ịmalite ịkpọ egwu na ime kọmputa mgbe 10 sekọnd ma ọ bụ otú ahụ!
Nkebi nke 3: VLC Streamer
Company: Hobbyist Software Ltd.
Atụmatụ: VLC Streamer eji VLC aka n'ezie ntughari nke nkiri na usoro kwesịrị ekwesị maka iOS na Android ngwaọrụ.
Nkebi nke 4: Olee otú iji VLC Streamer iji strimụ videos na ọtụtụ ngwaọrụ
Nzọụkwụ 1: Jiri n'elu nyere njikọ ibudata na wụnye software na gị kpọmkwem ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 2: Gbaa ndị VLC Streamer Inyeaka, na a ikpe n'ihi na Windows ma tinye ihe nkiri ị ga-achọ enubakwa n'ime ya.
Nzọụkwụ 3: Ugbu a, gaa VLC Streamer na mkpanaka gị na ngwaọrụ, na nke a na-iPhone na-emeghe VLC Streamer, ọ ga-amalite site screening maka kọmputa.
Nzọụkwụ 4: N'otu oge, gị na kọmputa (Windows ma ọ bụ Mac) a hụrụ na egosipụta na ngwaọrụ mkpanaaka, pịa na kọmputa gị aha ke ndepụta.
Nzọụkwụ 5: Tinye nkiri si ndepụta dị ma ọ bụ ị nwekwara ike ịchọ ya.
Nzọụkwụ 6: Ugbu a, ọ ga-ewe gị ka gụgharia Ogo peeji, họrọ mkpebi ga-amasị gị na-egwu nkiri na na pịa bọtịnụ Nọrọ na Nche!
Nzọụkwụ 7: n'ime ọzọ 10-15 sekọnd, ị kwesịrị ị na-enwe ike ịhụ ihe nkiri a na-egwuri na mkpanaka gị na ngwaọrụ.
VLC Media Player na VLC Streamer abụọ bụ ndị magburu onwe n'ọnụ nkwanye videos. The VLC Streamer na tumadi iji na nkwanye videos na gị mobile ngwaọrụ site na kọmputa gị ebe VLC Media Player nwere ike ime otu ihe ahụ na ngwaọrụ mkpanaaka na ndị ọzọ na kọmputa na ị nwere dị ka mma.
Wondershare Video Converter Ultimate, Ihe powerfull karịa VLC, dị maka Windows, Mac na nwere ike igwu nta ọ bụla ọdịyo na video usoro. Ọzọkwa, ọ nwere ike tọghata, download, dezie, ọkụ, ndekọ, iyi ma kpọọ vidiyo. Ọ nwere ngwa ngwa niile video ngwọta.
The Best VLC Alternative, All-Na-Otu Video Ngwọta!
The VLC Alternative bụ otu n'ime ndị kasị media Player na nwere ike igwu music na video faịlụ n'otu ntabi enweghị ihe ọ bụla glitches. Otu nwere ike mbugharị na na ka na-enwe elu àgwà n'ụzọ doro anya, ihe na-ọtụtụ ndị ọzọ media Player enweghị ka a mma. Ọ nwere ọzọ magburu onwe mma nke na-enye ohere akpaaka shutdown nke igwe mgbe playback. Ịbụ otu n'ime ndị kasị nso-nso àjà na ahịa, ọ nwere ụfọdụ ikenyeneke mbiet atụmatụ na-ụzọ mma karịa ya ndị asọmpi.
Bụ VLC Nchekwa?
KMplayer vs VLC Media Player, nke bụ mma otu
Olee otú igwu egwu WMV faịlụ na VLC?
Olee otú Idozi ".flv faịlụ bụghị egosipụta video" na-eji VLC Media Player?
Olee otú ịgbanwe / mmekọrịta VLC sobtaitel oge?
Nbudata kacha ọhụrụ Version nke VLC
> Resource> VLC> Stream vidiyo na VLC Media Player ma ọ bụ VLC Streamer